Fihaonana eo amin'ny Governemanta sy ny Solombavam-bahoaka | Primature
Fihaonana eo amin’ny Governemanta sy ny Solombavam-bahoaka
2 décembre 2021 18 février 2022
Lapan’i Mahazoarivo, 02 desambra 2021 – Nanomboka androany 02 desambra ary mitohy rahampitso 03 desambra, eny amin’ny CCI Ivato ny fihaonana eo amin’ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka, fihaonana izay voafaritry ny Lalàmpanorenana ho fampandehanana ny raharaham-pirenena.
Nisongadina nandritra ny teny fampidirana nataon’ny Praiminisitra, Lehiben’ny goveremanta Ntsay Christian amin’izao fivoriana izao fa mbola miaina ao anatin’ny krizy ara-pahasalamana ateraky ny valanaretina Coronavirus ohatry ny firenena rehetra maneran-tany ny firenentsika.
Notsiahiviny fa nanomboka ny volana martsa tamin’ity taona ity dia voatery niditra tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika, satria mbola tsy voafehy ny valanaretina maneran-tany. Isika teto Madagasikara dia niezaka, teo ambany fitarihan’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika naka ireo fepetra rehetra izay mahasoa ny vahoaka Malagasy, hoy izy. Nilaina ireny fepetra maro isan-karazany ireny, nahafahantsika nifehy ny fivelaran’izany valanaretina izany teto amin’ny tany sy ny fanjakana, ary hitantsika ny vokany fa tao anatin’ny volana vitsivitsy dia nihena ny tranga. Ka taorian’ny dinika nataon’ny Filohan’ny Repoblika sy ny mpikambana manontolo ao anatin’ny governemanta dia nanapa-kevitra nanokatra ny sisintaniny i Madagasikara nanomboka ny faran’ny volana oktobra sy ny voalohandohany volana novambra, satria iaraha-nahalala ny fiantraikan’ny fikatonana teo amin’ny lafiny toe-karena.
Tato anatin’ny roa herinandro anefa izao dia misy indray ny variant vaovao “Omicron” izay mipariaka ao Afrika ka nahatonga ny firenena maro nanakatona ny sisintaniny amin’ny olona avy amin’ny firenena maro ao anatin’ny vondrona SADC. Ny fitondram-panjakana dia miezaka hatrany mandray ireo fepetra maro isan-karazany amin’izao ady ataontsika izao, ary indrisy, fa na eo aza izany fepetra izany dia mbola misy ihany ireo tranga vaovao, ka tokony hitandrina sy hanaraka ireo fepetra rehetra ireo ny tsirairay ho fanalefahana ny fivoaran’ny valanaretina eto amintsika.
Na misy aza anefa izany rehetra izany dia tsy maintsy hatrehina hatrany ny fampandrosoana ny firenentsika, “miandrandra fanatsarana hatrany isika na mikasika ny fiainam-bahoaka izany na ny fomba hahafahana mampandroso ny firenena” hoy ny Praiminisitra. Ary araky vinavinan’ny loi des finances amin’ny taona ho avy dia eritreretina ny hahatrarana ny fiakaran’ny arikarem-pirenena faobe ho 5,4%.
Ny fitondram-panjakana dia tsy mijery fotsiny ny zava-misy ka mitady ny fomba hahafahana manamaivana ny fiantraikan’izao valan’aretina izao amin’ny fiainan’ny mponina. Eo ny fijerena manokana ny tontolo ambanivohitra ka hanatsarana ny vokatra na amin’ny lafiny fambolena izany, na amin’ny lafiny fiompiana, na amin’ny lafiny jono. Eo ihany koa ny fampiasam-bolam-panjakana amin’ny alalan’ny fotodrafitrasa manerana ny Nosy ka hahafahana mamorona asa sy miteraka fidiram-bola ho an’ny vahoaka.
Mikasika ireo entana ilaina amin’ny andavan’andro indray dia efa nisy ny dinika niarahan’ny fitondram-panjakana sy ireo mpandraharaha, eo ihany koa ireo orinasa miara-miasa amin’ny fanjakana ka nahafana nanafatra vary sy simenitra hahafahana mandanjalanja ny fiantraikan’ny fikaran’ny vidin’entana eto amin’ny firenena. Efa manomboka ny fanaparitahana ny vary amin’ny vidiny mirary manerana an’I Madagasikara. Eo amin’izay lafiny sosialy izay ihany dia nofoanan’ny fitondram-panjakana tanteraka ny saran’ny fitsaboana any amin’ireo hopitaly maro manerana ny Nosy.
Noresahin’ny Lehiben’ny Governemanta ihany koa ny mikasika ny fitantana ny firenena amin’ny akapobeny, ka nilazany ny tokony handrindrana ny asa ary izay no antony hirosoana tsikelikely amin’ny fanavaozana ireo rafi-pifidianana eto Madagasikara.
Fotoanan’ny fanavaozana ny lisim-pifidianana izay fanao isan-taona ihany koa izao ka manentana ny vahoaka malagasy hisoratra anarana, hijery, ary hanara-maso ny asan’ny CENI sy ireo rantsamangaika rehetra voakasik’izany ny Praiminisitra.
← Fivoriana nampitàna antso ho an’ny faritra atsimon’ny nosy
Conseil du gouvernement du Mercredi 08 décembre 2021 →
Fitsidihana ny seranam-piaramanidin’Ivato